Madaxda xisbiyadda dalka oo Bayaan soo saaray Akhriso) – Radio Daljir
Maajo 15, 2019 4:26 b 0
Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen xisbiyada dalka ka jira arkood sida; Ilays, UPD, Wadajir, NDP iyo NPP ayaa waxay kaga hadleen aratidooda ku aadan doorashooyinka dalka ka dhicaya, iyagoo soo jeediyay doorashadu inay noqoto mid qof iyo cod ah.
Xisbiyadan, ayaa si fog uga hadlay xaalada siyaasadeed ee dalku uu xilligan ku jiro, waxayna si gaar ah ugu kuur-galeen doorashooyinka 2020-ka ka dhici doona Somalia.
Sidoo kale, war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashada ay noqoto qof iyo cod, isla markaana leh deegaan doorasho qayaxan oo ku saleysan nidaamka axsaabta iyo saami qaybsiga matalaad isku dheelli-tiran.
Guddoomiye Yariisow oo fal dambiyeed ku tilmaamay Imtixaankii la xaday ee suuqa la geliyay